३६ घण्टा नहुँदै संखुवासभा घट्ना प्रकरणकोमा प्रहरीलाइ मिल्यो सफलता ! – Butwal 24 News
September 7, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on ३६ घण्टा नहुँदै संखुवासभा घट्ना प्रकरणकोमा प्रहरीलाइ मिल्यो सफलता !
उनका अनुसार ह’ ‘त्या बिहान कि राति नै गरिएको हो भन्ने यकिन हुन बाँकी छ। वृद्धअवस्थाका बौदमानले पनि घटनाका बारेमा आफूले थाहा नपाएको बताएका छन्। बेलुकासँगै खाना खाएर सुतेको र बिहान हेर्दा श्रीमती (पार्वता)लाई मृत फेला पारेपछि छिमेकीलाई खबर गरेको उनले बताएका छन्।
नगद र गरगहना सुरक्षित, हत्या रहस्यमय